Uru Otú Ihe Na-acha Baara Gị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Mgbe ọ bụla i legharịrị anya, anya gị na ụbụrụ gị na-arụkọ ọrụ, mee ka ị ghọta ihe ị na-ahụ. Ị hụ mkpụrụ osisi, ị na-ekpebi ma ị̀ ga-ata ya. I lee anya n’ihu ígwé, i nwere ike kwuo na mmiri agaghị ezo taa. Ị na-ahụ mkpụrụ okwu ndị a ị na-agụ ugbu a ma ghọta ihe ha pụtara. N’eziokwu, ihe mere i ji ahụ ha ma ghọta ha bụ otú ha na-acha. Gịnị mere anyị ji kwuo otú a?
Ọ bụ otú mkpụrụ osisi na-acha ga-eme ka ị mata ma ọ̀ chaala ma ọ bụ na ọ chabeghị, ma è kwesịrị iri ya eri ma ọ bụ na e kwesịghị. Otú ihu ígwé na-acha na-eme ka ị mara ma mmiri ọ̀ ga-ezo, ka anwụ ọ̀ ga-acha. Ihe mere i ji na-ahụ ihe a ị na-agụ nke ọma bụ na akwụkwọ a na-acha ọcha, mkpụrụ okwu ndị e dere na ya ana-eji oji. Ọ bụ ya mere na ha anaghị achachi gị anya. N’eziokwu, otú ihe dị iche iche na-acha na-eme ka ị ghọta ihe ndị ị na-ahụ, na-emekwa ka ha ruo gị n’obi.
OTÚ IHE ANYỊ HỤRỤ NA-ACHA NA-EME KA O RUO ANYỊ N’OBI
Ọ bụrụ na ị gaa n’ụlọ ahịa, ị ga-ahụ ụdị ngwá ahịa dị iche iche a kpọsajuru na ya, ma ndị nnukwu ma ndị obere. A ma ụma kpọsa ha otú ọ ga-abụ ị hụ ha, ha amasị gị. Ma ị̀ ma ma ọ bụ na ị maghị, ndị na-ere ngwá ahịa na-asa anya na mmiri kpọsa ihe dị iche iche ụcha ya na ibe ya dabara ka ha dọta mmasị ndị e bu n’obi mepụta ha. Ndị ha bu n’obi mepụta ha nwere ike ịbụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwaanyị, ụmụaka ma ọ bụ ndị toro eto. Ndị na-achọ ime ụlọ mma na ndị na-achọ ákwà mma nakwa ndị na-ese ihe makwaara na otú ihe mmadụ hụrụ na-acha nwere ike ime ka onye ahụ nwee mmasị n’ihe ahụ.
Ebe mmadụ nọ too na omenala obodo ya nwere ike ime ka ihe na-agbata ya n’obi ma ọ hụ ihe na-eji oji ma ọ bụ ihe na-acha otú ọzọ dị iche n’ihe ga-agbata onye ọzọ n’obi. Dị ka ihe atụ, n’Eshia, e nwere ndị weere ihe na-acha uhie uhie ka ihe na-egosi na ihe ọma emeela nakwa ihe na-egosi oge ọṅụ. Ma n’ebe ụfọdụ n’Afrịka, ihe na-acha uhie uhie na-egosi na ndị mmadụ na-eru uju. Ma mgbe ụfọdụ, ihe na-agbata ndị mmadụ n’obi ma ha hụ otú ihe ụfọdụ na-acha na-abụ otu n’agbanyeghị ebe ha si. Ka anyị leba anya n’ụfọdụ n’ime ha.
IHE NA-ACHA ỌBARA ỌBARA na-achapụ achapụ n’anya. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ahụ ebe e gechiri ákwá na-acha ọbara ọbara, ihe na-agbatakarị ha n’obi bụ agha ma ọ bụ na e nwere nsogbu n’ebe ahụ. Ozugbo mmadụ hụrụ ụdị ihe a, obi na-amalite ịkụ ya kpum kpum, ya ekuwe ume ọkụ ọkụ. Nri dị ya n’ahụ́ na-amalitekwa ịgbari ngwa ngwa.
Na Baịbụl, okwu Hibru a sụgharịrị “ihe na-acha ọbara ọbara” si n’okwu Hibru pụtara “ọbara.” Mgbe Baịbụl na-ekwu banyere otu nwaanyị akwụna, ọ sịrị na o yi ákwà odo odo na ákwà uhie uhie, ya bụ, ọbara ọbara. Ọ sịkwara na nwaanyị a nọ n’elu “otu anụ ọhịa nke na-acha uhie uhie” nakwa na o “jupụtara n’aha nke na-ekwulu Chineke.”—Mkpughe 17:1-6.
IHE NA-ACHA AKWỤKWỌ NDỤ AKWỤKWỌ NDỤ na-adị jụụ n’anya. Ebe ọ bụ na ọ na-eme ka ahụ́ ruo mmadụ ala, mmadụ hụ ya, ọ naghị eme ka nri dị ya n’ahụ́ gbariwe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na mmadụ ahụ ebe e gechiri ákwà na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ihe ọ na-egosikarị bụ udo. Ahụ́ na-eru anyị ala ma anyị nọrọ n’ubi ma ọ bụ mbara ala akwụkwọ ndụ juru. Akwụkwọ Jenesis kwuru na Chineke kere ahịhịa ndụ na akwụkwọ ndụ dị iche iche maka ụmụ mmadụ.—Jenesis 1:11, 12, 29, 30.
IHE NA-ACHA ỌCHA na-egbuke egbuke n’anya. Ihe na-agbatakarị ndị mmadụ n’obi ma ha hụ ihe na-acha ọcha bụ ìhè na ihe dị nsọ. Ihe na-acha ọcha pụtakwara ihe dị mma na ihe na-arụghị arụ. Ọ bụ ihe ndị na-acha ọcha ka a kacha kpọọ aha na Baịbụl karịa ihe ndị na-acha otú ọ bụla ọzọ. Mgbe Chineke mere ka ndị ohu ya hụ ọhụụ, ụmụ mmadụ na ndị mmụọ ozi ha hụrụ yi uwe ọcha. Nke a gosiri na ndị ahụ a hụrụ n’ọhụụ bụ ndị ezi omume na ndị na-efe naanị Chineke. (Jọn 20:12; Mkpughe 3:4; 7:9, 13, 14) Ịnyịnya ọcha na ndị na-agba ha, bụ́ ndị yi ákwà linin na-acha ọcha, pụtara agha ọma nke si n’aka Chineke. (Mkpughe 19:14) Ihe na-acha ọcha na-egosikwa na Chineke chọrọ ịgbaghara ndị mmadụ mmehie ha. Ọ bụ ya mere Chineke ji sị: “Ọ bụrụgodị na mmehie unu na-acha uhie uhie, m ga-eme ka ọ na-acha ezigbo ọcha.”—Aịzaya 1:18.
OTÚ IHE NA-ACHA NA-EME KA ANYỊ GHARA ICHEFU YA
Baịbụl gwara anyị otú ihe dị iche iche o kwuru okwu ha na-acha. Nke a gosiri na Chineke ghọtara na ịhụ otú ihe na-acha baara anyị uru. Dị ka ihe atụ, Akwụkwọ Mkpughe kwuru ihe dị iche iche na-eme n’oge anyị, dị ka agha, ụnwụ, agụụ na ọrịa ndị na-egbu ndị mmadụ. Ọ kọọrọ anyị banyere ịnyịnya dị iche iche na ndị na-agba ha, gwakwa anyị otú ha niile na-acha ka anyị nwee ike ịna-echeta ha ngwa ngwa.
Ịnyịnya nke mbụ na-acha ezigbo ọcha. Ihe ọ pụtara bụ agha ọma Jizọs Kraịst na-alụ. Ịnyịnya nke abụọ na-acha uhie uhie. Nke a pụtara agha mba dị iche iche na-alụrịta. Ịnyịnya sochiri ya bụ ịnyịnya ojii. Ihe ọ pụtara bụ ụkọ nri. Ịnyịnya nke ikpeazụ e kwuru okwu ya bụ “ịnyịnya nke ahụ́ ya chanwụrụ achanwụ; onye nọ n’elu ya nwekwara aha bụ́ Ọnwụ.” (Mkpughe 6:1-8) Otú ịnyịnya nke ọ bụla na-acha na-eme ka anyị ghọta ihe ọ pụtara. Ọ dịịrị anyị mfe icheta otú ha niile na-acha nakwa ihe ha na-akụziri anyị gbasara oge anyị a.
E nwere ọtụtụ ebe Baịbụl ji otú ihe ndị ọ kọrọ akụkọ ha na-acha mee ka anyị ghọta ihe a na-ekwu. N’eziokwu, Onye kere ìhè na anya ụmụ mmadụ na-eji otú ihe dị iche iche na-acha eme ka anyị ghọta ihe ndị e dere na Baịbụl ma na-echeta ha. Otú ihe anyị na-ahụ na-acha na-eme ka anyị ghọta ihe ahụ nke ọma, ọ na-emekwa ka ihe anyị hụrụ ruo anyị n’obi. Ọ na-eme ka anyị ghara ichefu ihe ndị dị mkpa. N’eziokwu, ọ bụ Chineke mere ka ihe dị iche iche na-acha otú ha na-acha ka ndụ nwee ike ịna-atọ anyị ụtọ.
Mgbe Noa na ezinụlọ ya si n’ụgbọ pụta, Chineke mere ka ha hụ eke na egwurugwu mara mma, nke o ji gosi ha na ya ga-emezu nkwa o kwere ha, ya bụ, na ọ gakwaghị eji iju mmiri bibie ụwa. Ọ ga-abụ na otú eke na egwurugwu ahụ si maa mma dị egwu mere ka ha ghara ichefu ya echefu.—Jenesis 9:12-17.
O nwere ike ịna-eju ndị kweere na e keghị ụmụ mmadụ eke anya na ọ na-abụ mmadụ lee ihe anya, ya ahụ otú ihe ahụ na-acha n’agbanyeghị na ọ ka ga-adị ndụ ma ọ bụrụ na ọ hụghị otú ọ na-acha. Ma, ọ bụrụ na anyị ekweta na Onye kere anyị kere anyị ka anyị na-ahụ otú ihe ọ bụla na-acha, anyị ga-aghọta na o kere anyị otú ahụ ka ndụ na-atọ anyị ụtọ n’ihi na ọ hụrụ anyị n’anya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Uru Otú Ihe Dị Iche Iche Na-acha Baara Gị?